Xinhua Myanmar - ကုလသမဂ္ဂက ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအား စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့် စောင့်ကြည့်နေ
ကုလသမဂ္ဂက ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအား စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့် စောင့်ကြည့်နေ
အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ရှိ ကုသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရှေ့တွင် လမ်းလျှောက်သွားသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) International Organizations
ကုလသမဂ္ဂ၊ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွါးနေသော အခြေအနေအပေါ် " အလွန်နီးကပ်စွာနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြင့်" စောင့်ကြည့်လျက်ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
" မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိနောက်ဆုံး နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေဟာ နိုင်ငံအတွင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ကြုံတွေ့ပြီး လူမှုစီးပွားကဏ္ဍအပေါ် သိသာတဲ့သက်ရောက်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ပေါက်တာပါ " ဟု ကုလသမဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူအကြီးအကဲ Stephane Dujarric က ဆိုသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က ကာကွယ်ဆေးပထမအသုတ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း နှင့် လတ်တလော အနာဂတ်အတွက် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရေးမှာ ဦးစားပေးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်း ၂,၅၀၀ ကျော် ရှိနေပြီး မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဒီမိုကရေစီရေး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး စသည့် နယ်ပယ်များတွင် အရေးပါသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ တုံ့ပြန်ရန် အရေးကြီးသော ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း နှင့် နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူ တစ်သန်းကျော်အတွက် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။( Xinhua)
UN watching Myanmar situation with concern during health emergency
UNITED NATIONS, Feb.3(Xinhua) -- The United Nations is watching the situation in Myanmar "very closely and with concern,"aUN spokesman said on Wednesday.
"The latest political developments in Myanmar come ataparticularly difficult time for the country, as it is experiencingapublic health emergency with significant socio-economic impacts," said Stephane Dujarric, the chief spokesman for UN Secretary-General Antonio Guterres.
The first vaccines arrived in Myanmar only last week and the response to the COVID-19 pandemic must remainapriority for the foreseeable future, he toldaregular briefing.
The United Nations has more than 2,500 personnel in Myanmar, both international and national, providing crucial development and humanitarian support to the people of Myanmar in their pursuit of democracy, peace, human rights and the rule of law, he said.
The United Nations has been providing significant support to the public health response to COVID-19 in Myanmar. The world body is also providing humanitarian assistance to more than 1 million people in the country, he said. Enditem
A woman walks past the United Nations headquarters in New York, the United States, Sept. 14, 2020. (Xinhua/Wang Ying)
Previous Article ပထမဆုံး အာဖရိကန်အမျိုးသမီး အကြီးအကဲကို ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ကြိုဆို
Next Article ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှုကို ဖြေရှင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ် ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းများက အံ့ဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း အိုလံပစ် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌပြောကြား
ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုထိန်းချုပ်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး မက္ကဆီကိုနှင့် အမေရိကန် သဘောတူ